Tsipika mazava, fomba tantara an-tsary izay nampalaza an'i Hergé tamin'ny Tintin | Famoronana an-tserasera
Ny tsipika mazava dia sary miaina na tantara an-tsary niaviany avy amin'ny Franco-Belgian, miaraka amina toetra marobe mamaritra azy. Izy io dia manana vondron'olona mpanoratra manana azy noho ny fitantarana an-tsary. Ireo mpanoratra ireo dia manao azy ho azy ary mampivoatra azy ireo amin'ny tantarany sy ny toetrany, mahatonga azy hanana ny lasa, ny ankehitriny ary ny ho avy hatramin'ny namoronana azy ary ny fakany hadino ka mandraka ankehitriny.
Ny tsipika mazava nanjary nalaza ary nandray ny anarany tamin'ny telovolana farany tamin'ny taonjato faha-XNUMX izay toerana nahitana an'i Hergé fanta-daza, Georges Remi, rain'i Tintin, nanjary nalaza ho mpialoha lalana an'ity hetsika na fomba fitantarana sary ity. Noho ny fitsipika hentitra, baiko sy fanalahidy amin'ny fomba fitantarana sy sary, ny tsipika mazava dia nanamarika ny fomba tamin'ny taona 80 ka hatramin'ny fifandimbiasan'ny taonjato ary ny fitaomany tonga hatrany amin'ireo mpanakanto sy mpanao sariitatra maro ankehitriny.
Ny toetra mampiavaka izay manondro fa ny asa dia voarakotra eo ambanin'ny elo amin'ny tsipika mazava dia ireto manaraka ireto:
Famerana ny tarehimarika mavitrika ny vignette amin'ny alàlan'ny tsipika mitohy sy voadio.
Ny tsy fisian'ny tonon'ny tetezamita afovoany, teboka mainty, na ny vokan'ny aloka sy hazavana.
Fanatsarana ny vokatra saron-tava, na ny dikan'ny hoe manambatra tarehin-tsoratra mariky ny sary mihetsika toy ny sary mihetsika manohitra tontolo iainana, mba hampifantohana ny sain'ny protagonista amin'ireo olo-manan-danja amin'ny tantara.
Fanaraha-maso henjana ny fitantarana mahazatra, miaraka amin'ny vignette na tifitra maivana.
Fidelity amin'ny tantaran'ny karazana karazana, indrindra ny tantaram-pitiavana.
Ireo toetra rehetra ireo dia manampy ny tantara iray ho takarina mazava tsara nefa tsy misy antony manosika be loatra miafina ao anaty sary, izay ahafahan'ny mpamaky mifantoka amin'ny fahatsoran'ny fitantarana, ny script ary ny tifitra, nefa tsy tototry ny fahatsapana literatiora mifanohitra aminy.
Ny tsipika mazava tarihin'i George McManus, mpamorona ny Bringing up Father
Fahita tokoa ny manome ny anaram-boninahitra mpamorona an'ity fomba ity ho an'i Hergé, ary na dia izy aza no nitana andraikitra tamin'ny famoahana azy tamin'ny alàlan'i Tinín ary nanitatra izany tamin'ny mpanao sariitatra sy artista frantsay-belza iray manontolo, manome ny maha-izy azy matanjaka sy fananganana bastion amin'ilay fantatra toy ny tantara an-tsary eoropeanina, dia tsy rariny mihitsy raha tsy hiteny George McManus, mpanoratra malaza amin'ny Bringing up Father izay nahafaly ireo mpamaky ny gazety amerikana tamin'ny fiandohany tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
George McManus dia nisy fiatraikany mivantana tamin'ny fombany tamin'ny Alain de Saint Hogan, azontsika jerena amin'ny sangan'asany Zig et Puce, ary hamaranana ny fizotry ny hetsika sy ny fitaomana dia holazainay fa mpianatra tian'i Alain i Hergé.
Miaraka amin'ity fifandraisan'ny mpanakanto tsotra ity dia manana tsipika mahitsizoro isika izay mampivondrona ny sarimiaina amerikana mahazatra hatramin'ny fiandohan'ny taonjato lasa miaraka amin'ny tsipika mazava malaza, ity farany dia miorim-paka ary manome ny maha izy azy ny tantara an-tsary eoropeanina. Ity fanambarana ity dia nitaky adihevitra marobe teo amin'ireo mpanakanto izay nampiasa ity fomba fanaovana sary sy fitantarana ity tamin'ny taona 80, saingy raha nanaporofo izany dia sarotra ny misalasala amin'ireo fitaomana ireo.
Ny Clear Line, na dia tamin'ny foto-kevitra teo aloha aza, dia teraka tamin'io taranaky ny taona 80 io vokatry ny fanamarinana ireo mpanakanto niarahan'i Hergé nizara sanganasa, ary tao amin'izy ireo no nanaitra ny olona, ​​dia takatr'izy ireo fa Ny Clear Line dia miharihary fomba iray ary nanana fitsipika sasany tokony harovanaNamporisihina izy ireo hitaky ny mpanoratra frantsay eropeana-belza.
Na dia eken'ny besinimaro aza izany ary tokony homena mari-pankasitrahana izy ireo dia tsy tokony hadinonay ny fitaomana ho mpisava lalana namorona ity fomba ity, araka ny efa nolazainay taminareo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tsipika mazava, fomba tantara an-tsary izay nampalaza an'i Hergé tamin'i Tintin